निर्वाचनको मतगणनाको विषयमा के भन्छन् दलहरू ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
निर्वाचनको मतगणनाको विषयमा के भन्छन् दलहरू ?
‘मतदानलगत्तै मतगणना गर्ने निर्वाचन आयोगको एकपक्षीय तयारी हामीलाई मान्य छैन । यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । आयोगले अहिले जे गरिरहेको छ, यसले निर्वाचन आचारसंहिता र विश्वव्यापी मान्यता उल्लंघन गर्छ ।’ -योगेश भट्टराई, एमाले सचिव । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।